काठमाडौँका यी धन्दावालसँग प्रहरीले खोस्यो हतियार, अब को-को सँग छ ? (समाचार प्रभाव) - Dainik Nepal
काठमाडौँका यी धन्दावालसँग प्रहरीले खोस्यो हतियार, अब को-को सँग छ ? (समाचार प्रभाव)
दैनिक नेपाल २०७५ जेठ २७ गते १९:०४
काठमाडौं, २७ जेठ । प्रहरीले काठमाडौँका चार जना धन्दावालबाट हतियार खोसेको छ । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले ‘म्यानपावर डन’ रघुनाथ पुरी, मिटरब्याज कारोबारीहरु वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, बले भनिने बलराम सापकोटा र गुण्डा नाइके आंगकाजी शेर्पाबाट हतियार बरामद गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरुलाई हचुवाको भरमा हतियार राख्न ईजाजत दिएको थियो । अपराध अनुसन्धान महाशाखाले उनीहरुले राखेका हतियारको इजाजत रद्द गरी आइतबार बरामद गरेको हो । आपराधिक पुष्ठभूमिबाट गुज्रिरहेका व्यक्तिहरूले ईजाजत पाउँदा हतियारको दुरुपयोग हुनुको साथै सुरक्षामा चुनौति थपिएको थियो । यस विषयमा गत जेठ ८ गते दैनिक नेपालले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रहरीको सूचीमा लुटेरा हुँदै गुण्डागर्दीबाट व्यापारी तथा ठेकेदार बनेका काजी शेर्पाले अत्याधुनिक हतियार राख्दै आएका थिए ।
काभ्रे घर भई हाल राजधानीस्थित सिफल बस्ने वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने जीएसजी–५ नामक हतियार बोक्ने गरेका थिए । श्रेष्ठ अवैध तरिकाले मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । सहकारीको नाममा श्रेष्ठले अहिले मिटर व्याजको धन्दा चलाउँदै आएका छन् । नेपाल प्रहरीका उच्च प्रहरी अधिकृतको रुपैंया श्रेष्ठले सस्तो ब्याजमा लिएर क्यासिनोका दलाल, जुवाडे र घर जग्गाको व्यावसायीहरूलाई मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने गरेको स्रोतले बतायो । लगानी गरेको रुपैंया असुल्न श्रेष्ठले ईजाजत प्राप्त हतियारको दुरुप्रयोग गर्ने गरेको पीडितले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
यसैगरी, छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति कमाएका रघु पुरीसँग जीएसजी–५ हतियार थियो । पुरानो बानेश्वर बत्तिसपुतलीस्थित रहेको द रिभर ओभरसिजका संचालक रघु पुरीले पनि अवैध धन्दाबाट बच्न हतियारको लाईसेन्स लिएका हुन्। कुनै बेला प्रतिबन्धित मुलुक इराकमा कामदार पठाएर अकुत सम्पत्ति जोडेका पुरीका काठमाडौँमा अनेक धन्दा छन् । तर, उनी आवरणमा पनि समाजसेवीका रुपमा देखिन्छन् ।
काठमाडौँमा अझै पनि कतिपय व्यक्तिसँग हतियार छ । उनीहरुले इजाजत लिएर हतियार राखे पनि त्यो गलत रुपमा प्रयोग भएको प्रहरीको आशंका छ ।
यसो त यसअघि पनि बैध रुपमा राखेका हतियार अबैध तरिकाले प्रयोग गरेको अबस्थामा फेला पर्ने गरेको थियो । अवैध तरिकाले असुलेको रुपैयाँबाट नवधनाड्यको सूचीमा रहेका एकान्तकुनाका महेशबहादुर सिंहसँग प्रहरीले तीन वर्षअघि ईजाजत प्राप्त ६ थान हतियार बरामद गरेको थियो । त्यस्तै त्यही बर्ष शंकरदेव क्याम्पसका स्ववियु सभापति सुकबहादुर बस्नेत र चार बर्षअघि बालाजुबाट पक्राउ परेका तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ता यमबहादुर कार्कीलाई राज्यले हतियार राख्ने ईजाजत दिनुपर्ने कारण थिएन । यी सबैका हातबाट प्रहरीले अवैध रुपमा प्रयोग भएको वैध हतियार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
हतियार नियन्त्रणपछि प्रहरीको अनुसन्धानबाट ती ईजाजत प्राप्त हतियार धम्क्याउने, रकम असुली गर्ने र ठेक्कापट्टा कब्जा गर्न दुरुप्रयोग भएको खुलासा भएको थियो ।
जीएसजी–५ नामक अर्धस्वचालित हतियार बोक्नेहरूमा क्यासिनोमा नेपाली जुवाडेलाई लगानी गर्ने, क्यासिनोमा टेबुल चलाउने, चर्को ब्याजमा ऋण लगाएर सर्वसाधारण र व्यापारीको उठिबास गराउने, गुण्डागर्दी गर्ने देखि बैंकर र व्यापारी तथा नेपालको बरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसम्म रहेका छन् । जीएसजी–५ नामक अर्धस्वचालित हतियारको लाईसेन्स लिनेमा बैंकर किशोर महर्जन र ज्योति पाण्डे छन् । महर्जन सिभिल बैंकका पूर्वसिइओ र पाण्डे ईन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओ हुन् ।
पछिल्लो केही बर्षयता वैध हतियार देखाएर अवैध उद्देश्य पूरा गर्ने लहर राजधानीमा छाएको छ ।
आकर्षक आर्थिक प्रलोभनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरका कर्मचारीहरू परेपछि एक बर्षमा दर्जनौं हतियार नेपाल भित्रिएका छन् । यसमा प्रहरी र दलालहरूको समेत मिलेमतो रहेको छ भने हतियार मगाएर मनलाग्दी विक्री वितरण र नामसारी गर्ने कार्य तिव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
जुन व्यक्तिलाई प्रशासनले हतियारको लाइसेन्स दिएको हो,, सो व्यक्तिले पाँच बर्षसम्म हतियार नामसारी र विक्री वितरण गर्न मिल्दैन । गत वर्ष चलनचल्तीमा २२ बोर (२२ क्यालिबर) को भनिने जीएसजी–५ नामक हतियार सामान्य व्यक्तिको नाममा मगाएर केही दिनमै गुन्डाका नाइकेलगायतलाई नामसारी गरेको समेत प्रमाण भेटिएको छ ।
गृह प्रशासनले कसैको नाममा हतियार इजाजतपत्र पाएको पाँच बर्षसम्म अर्को हतियार ल्याउन वा नामसारी गर्नु गैरकानुनी मानेको छ । नेपालमा हातहतियारसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा इजाजतपत्र हतियार प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ ।